Aircraft history has landed in Mandalay! ..သမိုင်းဝင်လေယာဉ်ကြီးမန္တလေးမှာဆင်းသက်ခဲ့ပါပြီ။ | dawnmanhon
Aircraft history has landed in Mandalay! ..သမိုင်းဝင်လေယာဉ်ကြီးမန္တလေးမှာဆင်းသက်ခဲ့ပါပြီ။
သမိုင်းဝင်လေယာဉ်ကြီးမန္တလေးမှာဆင်းသက်ခဲ့ပါပြီ။ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် သမိုင်းဝင်လေယာဉ်တစ်စီးဖြစ်သော စီ-၄၇ သည် သူ့၏နောက်ဆုံးခရီးစဉ်ဖြစ်သော တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကွေ့လင်မြို့ (Guilin) ရှိ ကျားပျံအမွေအနှစ်ပြတိုက် (Flying Tiger Heritage Museum) တွင်ထာဝရထားရှိပြသရန်အတွက် ဟမ့်တောင်ကုန်းတစ်လျှောက်ပေါ်မှ မပျံသန်းမီ မန္တလေးမြို့တွင် ဒီကနေ့ ဆင်းသက်ခဲ့ပါသည်။ အန္တရာယ်ကြီးစွာ မောင်းနှင်ပျံသန်းခဲ့ကြသော ကျားပျံများဟု လူသိများသည့် လေယာဉ်မှူးများနှင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက စစ်အောင်နိုင်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက် ကြိုးစားအားထုတ်ရန် ဤခရီးလမ်းကြောင်းတွင်လှုပ်ရှားသွားလာခဲ့ကြသည့် ဒေသတွင်းမှလူပုဂ္ဂိုလ်များအား ဤပြတိုက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားရှိပါသည်။
ဟမ့်တောင်ကုန်းတစ်လျှောက်ခရီးစဉ်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ မဝင်ရောက်မီ ဟိမဝန္တာတောင်တန်းပေါ်မှ ပျံသန်းသွားသည့်ခရီးကိုခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက အမေရိကန်လေယာဉ်မှူးများ အသုံးပြုပျံသန်းမောင်းနှင်ခဲ့ရသည့် အန္တရာယ်အကြီးမားဆုံး လေကြောင်းခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤခရီးစဉ်ကိုပျံသန်းမောင်းနှင်ခဲ့ကြသည့် ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသောလေယာဉ်မှူးများကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ဆက်လက်၍ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြမည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့သောနိုင်ငံများအကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုပြသသောအားဖြင့်လည်းကောင်း ဤလေယာဉ်က ပျံသန်းမောင်းနှင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သမိုင်းဝင်လေယာဉ် စီ-၄၇ အကြောင်း တစေ့တစောင်းသိရဖို့ အောက်ကပုံတွေကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Aircraft history has landed in Mandalay! Followingaflight delay, an historic C-47 aircraft landed in Mandalay today before continuing its flight “across the hump” to reach its final destination in Guilin, China where it will go on permanent display at the Flying Tiger Heritage Museum. The museum chronicles the critical contribution made by the pilots known as the “Flying Tigers” and the people in the region who traveled the route in an effort to bring victory and peace to the region during World War II.
“Across the hump” refers to flying over the Himalayas before entering China—one of the most dangerous air routes of its time used by U.S. pilots during World War II. The flight will be conducted to honor the brave pilots who flew the route and acknowledge the friendships between nations today—like the United States and Myanmar— who continue to work together to maintain peace in the region.
Check out the photos below to getaglimpse of the historic C-47 aircraft!
dawnmanhon: Aircraft history has landed in Mandalay! ..သမိုင်းဝင်လေယာဉ်ကြီးမန္တလေးမှာဆင်းသက်ခဲ့ပါပြီ။